Ahoana ny fampiasana ny fanohanana mba hampiroboroboana ny marikao - Victor Mochere
Amin'ny zava-misy ankehitriny, ny sponsorship no fitaovana ara-barotra mitombo haingana indrindra any amin'ny firenena mandroso, mbola ao anatin'ny fahazazany. Ny sponsorship dia azo jerena ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra, ary ho toy ny teknolojia manara-penitra amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro. Amin'ny maha-fitaovana ara-barotra azy, mahasarika ny fanohanana satria mamaha asa maro azo tsapain-tanana izy: mampiroborobo ny marika, mandrisika ny fitomboan'ny varotra, mamela ny fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpanjifa ny vokatra. Ny antony lehibe sy ny tanjon'ny fanohanana dia ny singa PR, izay manampy amin'ny fahatakarana sy fanamafisana ny sary sy ny lazan'ny mpanohana.
Ny sponsorship dia manampy amin'ny fampivoarana ny fikambanana sy sary tsara miaraka amin'ny marika ary manampy ny fahatokisana ny mpanohana amin'ny fiheveran'ny mpanjifa. Ny soatoavina lehibe amin'ny fanohanana dia ny fananganana ny fahatsiarovan-tenan'ny mpihaino momba ny orinasa na ny vokatra azony, izay azo amin'ny alàlan'ny fanononana tsy tapaka ny orinasa amin'ny haino aman-jery sy ny fandrakofana ny andraikitra ara-tsosialy amin'ny orinasa. Manorina sy manatanjaka ny fanajana ary mitazona laza ho an'ny mpihaino mety.
Ny orinasa dia mamorona sy mampihatra programa fanohanana mba hanaparitahana vaovao momba ny orinasa sy ny vokatra ary hiantohana ny lazan'ny marika. Ny fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny fepetra toy izany dia ny "manapaka" ny tsy fahampian'ny fahatsapana sy ny sakana amin'ny fampahalalana momba ny fiarovana ny mpanjifa ary ny fampitomboana ny haavon'ny fanekena ny sarin'ny orinasa sy ny entany amin'ny alàlan'ny fiarahana amin'ny hetsika lehibe, hetsika fialamboly, olo-malaza, hevitra manam-pahaizana, ary fampahalalana, na asa mifandray amin'ny tanjona ambony.
Ny hetsika toy izany dia manome ny mpanohana ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery, ny hafanam-pon'ny mpiasan'ny varotra, ary ny fanohanana ny hevitry ny besinimaro. Ny orinasa mpanohana dia tsy miraharaha ny tenany sy ny tombony ara-bolany fotsiny. Miompana amin’ny lafiny sosialy ny fikambanana; miahy ny fiaraha-monina izany. Midika izany fa azo itokisana sy tokony hotohanana ny fikambanana toy izany. Ohatra, Ny hetsika mikendry ny fanavotana ny ankizy, ny famahana ny olana ara-tontolo iainana, na ny ady amin'ny aretina mahafaty dia tena mahomby sy valin'ny mpihaino.
Amin'ity ohatra ity, azontsika atao ny mihevitra fa misy teknika ara-psikolojika "tokonan'ny fahatsapana". Noho izany, ny sponsorship dia miasa ara-psikolojika amin'ny mpanjifa, miteraka fihetseham-po mangoraka, misy fiantraikany amin'ny lafiny manokana amin'ny olona. Mba hampiharana ny fanohanana ho toy ny sarin'ny marika dia tsy maintsy manaraka ireto torohevitra manaraka ireto ianao:
Mba hanohanana tetikasa lehibe, minia hahomby, miavaka ihany, satria misy stereotype amin'ny hevitry ny besinimaro fa ny orinasa malaza dia manohana tetikasa malaza - izany dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fametrahana ny orinasa ary hanafoana ny hetsika kely sy mahazatra.
Fametrahana marina. Ity asa ity dia ny fampahafantarana, famoronana ary fanohanana sary mazava momba ny mpihaino kendrena sy ny sarin'ny orinasa. Ireo mpiara-miombon'antoka dia miantso ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa mifototra amin'ny fifanarahana fiaraha-miasa. Ny mpiara-miombon'antoka dia mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny orinasany manokana, mandray fanapahan-kevitra manan-danja, mifampiraharaha, mandray ampahany amin'ny tombom-barotry ny orinasa dia miankina amin'ny fandraisana anjara natao, ny anjara
Ny fandaharan'asa fanohanana dia tsy tokony ho fohy sy tokana. Tsara kokoa ny misafidy faritra iray sy hetsika maromaro mifanaraka amin'ny sarin'ny orinasa ary mifikitra amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra, mikatsaka hetsika amin'ity lalana ity.
Asehoy ny fahatsoram-po. Raha mino ny fahamarinan'ny fikasan'ny mpanohana ny mpanjifa, dia mitombo ny fahombiazan'ny hetsika fanohanana. Ny mpanjifa dia tsy tokony hahatsapa ny dokam-barotra misokatra, ny fifandraisana mandresy lahatra fa ny orinasa dia mpanohana, ary ny fandroahana ny tenany amin'ny pejy sy ny efijery amin'ny fantsona fampahalalam-baovao azy manokana - dia hanohitra ny sary izany. Ny mpanjifa dia tsaraina amin'ny fahatsoram-po amin'ny tanjon'ny fanohanana. Ny fanazaran-tena dia mampiseho fa ny hetsika miaraka amin'ny votoaty maha-olona sy ara-tsosialy dia mahazo valiny tsara indrindra avy amin'ny vahoaka. Noho izany, ilaina ny mandray anjara amin'ny famahana ny olana eo an-toerana, hanohanana ny hetsika ara-kolontsaina, fialam-boly, sosialy
Na dia ampiharina amin'ny fotoana maharitra sy ny fanohanana ara-bola aza ity hetsika ity satria ny fifandraisana amin'ny PR dia tsy midika hoe vokatra "eto sy ankehitriny". mahavita izany ary tokony hitondra vokatra azo tsapain-tanana ho an’ny fikambanana
Ahoana ny famolavolana paikady marketing mailaka mahasoa